Qhagamshela ubuninzi ngemephu evulekileyo yesitalato- iGeofumadas
Epreli, 2009 Google umhlaba / imephu, GIS asibonise, Ehlabathini elungileyo
Ngethuba elidlulileyo Ndathetha nabo Ezininzi zinokunxibelelana noGoogle, Yahoo kunye noMhlaba oBonakalayo. Ngoku isinxibelelanisi sokuqhagamshela kwiiMephu zeSitrato esivulekileyo (i-OSM) siphumile, esenziwe ngendlela kwiC # ngumsebenzisi weforum obizwa ngokuba yiJkelly.
Iindaba zavela ngeveki kule Iforamu yeqela, apho zombini .dll evumela uxhumano kunye nekhowudi zilayishwe ukuze umntu abone indlela eyenziwe ngayo kwaye azame ukuseka omnye umsi.
Ngenxa yoko, kufuneka khuphela, okwangoku kwidonga leMbonfold, i-dll ekufuneka ifakwe kwi "fayile yeefayile / i-Systemfold /", nje kwindawo apho ezinye izixhumo zifakwa khona.
Emva koko ukulayisha uluhlu lwenziwa nge "Ifayile / umfanekiso / isixhumanisi / iinkonzo zemiqondiso emininzi"
Oku kuvumela indawo yolawulo ukusuka apho unokukhetha kuzo zombini iimephu ze-Yahoo, uGoogle kunye noMhlaba oBonakalayo. Ngoku kuya kufuneka ukwazi ukubona ubume boMhlaba oBonakalayo:
Imephu yomjikelo we-Cloudemade
Ekugqibeleni unaleya yomfanekiso edityanisiweyo njengoko siza kubona kwi-OSM, kwaye unokwenza ii-zoom ezinokugcinwa kwi-Cache ukuba sithatha isigqibo sokwenza njalo xa kulayishwa umaleko. Inokunqanyulwa kwakhona, eya kuthi isinike ithuba lokukhetha ubungakanani bepikseli kunye nokugcina isigubungelo kwalapha.
Ukuyibona emephini, vele uyitsalele kumbono (imephu) kwaye inkqubo iya kulumkisa ukuba ayikho kwingqikelelo efanayo, ukuba ayifani ne-OSM. Ke kwithebhu engezantsi, yomaleko we-OSM esiye sayongeza kumboniso, cofa ekunene kwaye ukhethe "sebenzisa uqikelelo" kwaye kunjalo.
Kubonakala ngathi isenzo esihle kumnye wezona zixhobo ezinkulu kwi-online vector yolwazi bathetha, igcina izinto ezingaphezu kwe-364 yezigidi zemveliso yenethiwekhi ebanzi yabasebenzi. Ezinye iimveliso ezifana IMapper Global y Cadcorp bayakwenza
Uhlaziyo: Ithala leencwadi likhutshiwe ukunxibelelana neGoogle Earth Terrain.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Imibuzo emangalisayo malunga nobuchwepheshe beCAD / GIS
Post Next IiProjekthi zobunjineli nge-AutoCAD Civil 3DOkulandelayo »
Impendulo enye ku "Dibanisa izinto ezininzi ngemephu evulekileyo yesitalato"
Oko kuhle! Enye indlela ye-OS ... isebenza ngokugqibeleleyo ... Ngowuphi umsebenzi omkhulu uJames K.